35 saamaynta muuqaalka CSS ee aadan ku waayi karin websaydhkaaga. Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | CSS, Sawirro
Maanta sawiro ayaa ku jira shabakadda waxay noqdeen kuwo si weyn isha loogu hayo adeegsadaha ku soo dhawaada dhammaan noocyada mawduucyada. Laga soo bilaabo sawir qaadista, safarka, alaabada ama muuqaalada nooc kasta ha ahaadeene, sawirradu waa mid ka mid ah walxaha ugu muhiimsan, markaa haddii aan awoodno inaan soo saarno saameyn wax ku ool ah, sawirkaasi wuxuu yeelan doonaa awood uu ku ilaaliyo adeegsadaha ku soo dhacay degelkeenna.
Si fudud ayey u tahay waxa badan oo ka mid ah saameyntani ay awood u leeyihiin inay ku gaaraan booqdaha websaydhka. Saamaynta CSS oo runtii indho qabad leh mararka qaarkood iyo in kuwa kale ay leeyihiin ujeedada ah inay noqdaan wax fudud, in kasta oo had iyo jeer la gaaro waxa aan dhamaanteen raadineyno: in isticmaalaha uu fiiro gaar ah u leeyahay wax kasta oo ay websaydhadu bixiso. Aynu hadda liis garaynno saamaynta muuqaalka 33 CSS kuwaas oo si xoog leh indhaha u qabanaya.
1 Sawirka Qallooca Dheecaanka 3D
2 3D saameyn hover
4 Sawirada "janjeera" aragtida
5 Indhoolayaasha Venetian
6 Sawir kala
7 Hover saamaynta sawirka
8 Saamaynta muraayadda
9 Sawir leh saameyn milicsi
10 Muuqaal sawir oo saameyn hover ah
11 Hoos u dhig saameynta cilladda
12 Sawirka sawirka
13 Ku dul wareeji SVG
14 Laga soo bilaabo qoraalka illaa sawirka dul
15 Muujinta qayb ka mid ah sawirka asalka
16 Hover animation
17 Raad-reeb saamaynta
18 Muuqaalka Sawirka
19 Saameynaya durdur
20 Saameynta galaaska
22 Saamaynta guud ee CSS
23 Ku xoq sawirada
24 Dusha sare ee Sawirka
25 Saamaynta dusha sare ee sawirka
26 Saamaynta dusha sare ee sawirka
27 Hover saamayn la animation icon
28 Hover saamayn la subtitles
29 3D saameynta jihada
30 Cabirka sawirka
31 Saamaynta hooska macruufka leh 'React'
32 Shadow Style macruufka 10
33 Saamaynta kala-guurka sawirka
34 Kala guurka sawirka
35 Ku wareeji sawirka jiirka jiirka
Sawirka Qallooca Dheecaanka 3D
Saamaynta sawirkani runtii waa wax lala yaabo goorma u-jajabinta sawirka seddex geesood ah 3D kaas oo awood u leh inuu ku wareego qiyaastiisa toosan si uu u soo saaro saameyn muuqaal oo weyn. Iyada oo ku saleysan CSS3D, haddii aad awood u leedahay inaad ku hirgeliso boggaaga, booqdaha ayaa noqon doona mid aan hadlin.
3D saameyn hover
Saameyn kale oo muuqaal ah oo weyn si loo gaaro taas markaan ka tagno tilmaamaha jiirka sawirka, kan dhici sida haddii isku wax ku dhuftay. Animation A weyn u saamaynta kale image weyn.
HTML iyo CSS way isla socdaan si loo sameeyo a saameyn panorama weyn sidii oo aan ka eegaynay korka dhisme magaalo ku yaal.
Sawirada "janjeera" aragtida
Un tijaabo muuqaal ah kaas oo u adeegi kara ujeedo gaar ah oo qayb web ah.
Saamayn muuqaal oo weyn markasta ka tag tilmaanta jiirka si ay isu bedesho labada isbarbardhig ee sawirku siinayo.
Adoo dul wareegaya tilmaamaha jiirka sawirka, waa waa la weyneyn doonaa si looga dhigo mid sifiican uga kooban.
Hover saamaynta sawirka
Saamaynta shabakadda ayaa la soo saaraa marka la baxayo el tilmaamaha jiirka meel cayiman ka sawir
Sawirka duub waxtar leh muraayad maaddaama aan jiidayo tilmaamaha jiirka midig ilaa bidix iyo dhinaca kale.
Sawir leh saameyn milicsi
Ficil raadinaya ku muuji saameynta milicsiga sawirka in aan u isticmaalnay saameyntaan sawirka CSS ah.
Muuqaal sawir oo saameyn hover ah
Wuu gaari karaa xoogaa dawakhsan markay arkeen sida dhinacyada sawirka ay u soo saaraan saameyn aad u layaab badan oo labanlaaban.
Hoos u dhig saameynta cilladda
Markaan tilmaamaha u wareejineyno sawirka, waxay soo saartaa saameyn cillad ah taasi waxay ku baaba'aysaa ilbiriqsiyo gudahood.
Waxaa jira saameyn ah barokaca isla daqiiqadaas oo aan dul dhignay tilmaamaha jiir korka sawirka.
Ku dul wareeji SVG
Saameyn weyn oo hover ah oo dhigeysa qaawiyey sawirka qarsoon magaca laftiisa. Dhammaystir weyn oo ku habboon soo bandhigida sawir gacmeedyo xiiso leh oo sawirro ah.
Laga soo bilaabo qoraalka illaa sawirka dul
Qoraalku wuxuu muujiyaa sawirka markii tilmaamaha jiirku la wareego animation indhaha soo jiita leh saameyn indho la'aan ka furmay dhexda.
Muujinta qayb ka mid ah sawirka asalka
Sidii inaan gacanta ugu hayno isweydaarsiga muraayadaha telephoto, qayb ka mid ah sawirka asalka ah ayaa la muujiyey markaan dhaqaajinno tilmaamaha jiirka.
Saamayn weyn, laakiin aad u fudud in ay ka kooban. Hadaad wax raadineyso fudeyd iyo mid yar, saameyntan ayaa kaa dhigi doonta inaad jacayl gasho.
Kuwa kale saameyn fudud ujeeddo gaar ah.
Tani waa saamaynta zoom caadiga ah inaad hubaal rabto inaad uqaadatid websaydhkaaga hadda.
Beddelka kale sida u soo jiido saamayn markaan ka tagno tilmaamaha jiir baa dulsaaran sawirka
Sida magaceedaba ka muuqata, tilmaamaha jiirka ayaa rogi doona sawirka galaas weyneynaya oo weyneynaya.
Saamaynta guud ee CSS
Un saafiga CSS ee lakabka taas oo ku dhegan sawirka aan hayno.
Ku xoq sawirada
Waxaad leedahay maktabad animation-ka CSS loogu talagalay walxaha isticmaalaha. Waxaad ku arki kartaa dhammaantood bogga xiriiriyaha si aad u hesho midka kugu habboon. Waxaad leedahay dhowr saameyn oo aad kala dooran karto tayo sare leh.
Dusha sare ee Sawirka
Iyadoo animation tayo sare leh, isku shaandheyn il qabad leh ayaa lagu muujiyay. Mid kale oo noqon kara midka aad jeceshahay.
Saamaynta dusha sare ee sawirka
Waxaan ku laabaneynaa saameyn kale oo ah dulsaar HTML iyo CSS taas oo khadadka wareega ay yihiin halyeeyada.
Saameyn dusha sare leh oo loo adeegsan karo walxaha shabakadaha kala duwan. Iyada oo leh hal-abuur yar ayaa la dhexgelin karaa kaararka sida kuwa ku jira qodobkan.
Hover saamayn la animation icon
Tayo sare leh animation icon ah oo kugula jaanqaadi doona isbeddelada ugu horreeya. Wuu awoodaa keen qoraalka si aad u weyn.
Hover saamayn la subtitles
Saameyn kale oo weyn oo weyn oo leh subtitles ka muuqda animation aad u siman laguna gaadhay.
3D saameynta jihada
Mid ka mid ah saamaynta muuqaalka ugu kicinta badan waxaad ku arki doontaa liiska oo dhan. Ku tilmaamaha jiirka ayaa noqon doona hagaha loo yaqaan '3D cube'.
Saameyn kale oo fudud, laakiin aad u qurxoon oo aan lahayn barwaaqo badan.
Saamaynta hooska macruufka leh 'React'
Un saameyn la'aan faan la'aan badan, laakiin aad u la taaban karo saamaynta hooska ee ay soo saarto, maaddaama ay u muuqato sidii haddii laga soo qaaday "dhulka".
Shadow Style macruufka 10
Tilmaamaha jiirka ayaa leh Saamaynta 'riix' sawirka soo saara xaqiiqda weyn. Aad u xiiso badan.
Saamaynta kala-guurka sawirka
Un saameynta kala guurka ee cajiibka ah taas oo sawirka lagu jajabiyey shabakad shabag leh. Waad xakameyn kartaa waqtiga ay saameyntu dhacdo iyo in ka badan.
Kala guurka sawirka
Un saameyn ku-meel-gaadh ah oo isbeddel leh boggaaga. Ha seegin ballanta CSS-kan.
Ku wareeji sawirka jiirka jiirka
Waxaad u baahan doontaa ku hirgeli daqiiqad aad isticmaasho shaashadda jiirka si aad uga bedesho hal sawir oo mid kale oo animation kala guur ah. Cajiib ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Technologies » CSS » 35 runtii farxad u leh saamaynta sawirka CSS
Salaan Runtii waan ka helay saameynta aad soo dhigtay. Si jaanis ah ayaad u ogaan doontaa sida saameynta looga sameeyay meesha aad tilmaanta dul saarto sawir waxayna u dhaqaaqaysaa hoos ilaa kor, waxay ku habboon tahay muujinta horudhaca bogagga shabakadda. Halkan waxaa ku yaal tusaale waxa aan uga jeedo, qaybta «SHAQAALAHA SHAQAALO EE UGU DANBEEYA
»Laga soo bilaabo websaytka selectawebs.com
Jawaab ku sii Sandy Hernández
Bog aad u fiican iyo boostadaba, aad ayey ii anfacday aniga tan iyo markii aan u baahday xoogaa saameyn ah oo ku saabsan marinka marinka marinnada ee codsiyada gudaha. Aad baad ugu mahadsantahay tabarucaadan.
rogger gabriel dijo
Saamayn fiican. Aniga ayaa is-baray, marwalba waan jeclaa fikradda horumarinta webka wax badan, waxaan aad u jeclaan lahaa taladaada ku saabsan sida loo bilaabayo iyo habka loo marayo barashada. salaan
Jawaab ku saabsan rotger gabriel
Waad salaaman tihiin, waad ku mahadsan tihiin waxyaabaha aad ka kooban tihiin. Baro boggaaga maanta. Waa yaabe. Ma dhammaado akhriska iyo weydiimaha lagu dhex samayn karo. ;)
Hallow Natalia! Waan ku faraxsanahay inaad ku raaxeysatid akhriska halkan Hal-abuurka 'Creativos Online'. Salaan!
Haye liistada cajiibka ah ee saameynta wanaagsan, waxay noqon laheyd wax aad u qabow in la arko sida loogu adeegsado ereyada ereyga
Ku jawaab mendozalz
Qalinka Bamboo Tip cusub ee qalinka dijitaalka ah: Xalka Wacom ee Android iyo iOS
120 kun oo nambar waraaqo ah ayaa abuuraya tunnel qaanso roobaad oo muujinaya waqtigu inuu dhaafaayo